Ndị dị mkpa mmanụ na - enye canada | Organic dị ọcha 100%
Ndị dị mkpa mmanụ na-enye canada
A bịa n'ihe ndị yiri akpa na peminin, Washington bụ mpaghara kacha ibu n'ụwa. N'ụbọchị dị ọkụ na abalị dị jụụ na mpaghara a, ihe ọkụkụ ahụ na-eto nke ọma na ala Washington. Mint, nke na-akụ mkpụrụ osisi, chọrọ mmiri dị ukwuu wee chọọ ịlọ mmiri n'oge oyi, nke yiri ka ọ na-enyere aka ịbawanye mmanụ.
Ihe a na-eme ebe a na -emepụta mmanụ achara pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ ezinụlọ ya kemgbe afọ 1940. Onye oru ugbo a naeme mmanu kacha mma n’udo.
Ezie na ugbo a na-isi na Washington, ogwe osisi na-ebufe ọtụtụ steeti nwere ụlọ nkwakọba ihe ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ịkwụwa aka ọtọ na nghọta anyị na onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ mere ka ugbo a bụrụ ezigbo ndị na-ebu ngwa ahịa maka AromaEasy.
Mmanụ si n'ugbo:
Ugbo Victoria, Southern California, USA
Bergamot na-eto nke ọma na Southern California. Mpaghara mara mma a ma ama maka mkpụrụ osisi, anyị na-esikwa na bergamot mmanụ dị mkpa si ebe a.
Dika obe n'etiti lime na nkpuru osisi, bergamot diri ezi nkpuru citrus. A na-eji Bergamot eme ihe iji nweta mmanu di nkpa. Dika odi, ndi mmadu adighi eri nkpuru osisi bergamot n'ihi uto ilu ha.
A na-eji mmanụ ndị dị mkpa Bergamot mee ihe site na iji ngwa pụrụ iche iji "ete" anụ ahụ. Ngwaọrụ "na-ehicha" na-agbanye na mmiri zuru oke. Dị ka igwe na-ehicha anụ ahụ, a ga-ahapụ mmanụ bergamot n'ime mmiri. Mgbe ahụ, anyị na-ekewa mmanụ site na ngwakọta site na centrifuge.
Ugbo Victoria kpuchie acres 1,700 acres na nkpuru osisi citrus. A na-enwe mmiri mkpụrụ osisi areshụkọ na mkpụrụ osisi na-achaghị acha, lime, na mkpụrụ osisi grepu. Akụkụ ọ bụla nke mkpụrụ osisi ahụ na-aba uru nke ọma, na -eme ka ugbo a bụrụ ebe a na-adịghị enweta ahihia.
Bergamot Mkpa mmanu | Osisi Osisi Osisi Dị Mkpa
Ugwu Ochie, Canada
Osisi Pine-Mkpa Niile-Mkpota-North-America-ugbo
Osisi fir na-eto n’oké ọhịa. Ọ na-etolite na Canada na n'ebe ugwu United States. Osisi ahụ bụ agba ntụ, dị gịrịgịrị, na scaly. Mkpịsị ahụ dị mkpụmkpụ na otu agba n'etiti akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na acha anụnụ anụnụ.
A na-ejikarị osisi paini eme ihe maka osisi, ọwa mmiri, na akwụkwọ. Ministri oke ohia ehiwela usoro maka ịhazi ahihia nke ihe ọkụkụ a. AromaEasy na ndị otu ya na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na a na-ewekọta osisi fir na ezigbo ọrụ ma na-adigide.
Mgbe igbutusiri osisi, ogwe osisi ga-ahapụ alaka na agịga. Ndị na-adọ ụdọ bụ maka ebumnuche dịgasị iche. Agbanyeghị, ọ nweghị onye nwere ike ịnweta uru karịa alaka ndị ọzọ na agịga n'oge gara aga. Ma ugbu a, anyị mere ya.
Mgbe egbutusịrị osisi fir, anyị na-amalite ịnakọta alaka niile na agịga nke ndị na-echigharị ahụ hapụrụ. Mgbe ahụ, anyị na-ewepụta mmanụ dị ike ma dịkwa egwu site na ihe ndị a na-afọdụ site na mmiri ikuku.
Mmanụ si n'ubi a:
Pine Mkpa Mmanụ
Island Vancouver, British Columbia, Canada
Na 2019 - mgbe nyochachara na nyocha - AromaEasy chọpụtara ebe kachasị mma maka ịkụ mkpụrụ cypress wee zụta otu ugbo na Vancouver Island, British Columbia, Canada. Ala a dị ọcha na-enweghị ọgwụ kemịkal na fatịlaịza, ọ bụkwa ebe a na-ewe ihe ubi AromaEasy kwa afọ maka owuwe ihe ubi.
Ugbo a bu isi ihe eji eme mmanu mmanu mmanu, mmanu mmanu n’enye ntuzizi mmanu di ezigbo mkpa